Nelson Mandela oo Johannesburg ku geeriyooday - BBC News Somali
Nelson Mandela oo Johannesburg ku geeriyooday
Nelson Mandela, madaxweynihii ugu horeeyay ee madaw ah ee Koonfur Afrika ahaana halyeey la dagaalamay midab kala sooca ayaa geeriyooday, madaxweynaha Koonfur Afrika ayaa sidaa shaaciyay.
Mr Mandela, oo 95 jir ahaa, ayaa hogaamiyay Koonfur Afrika xilligii kala guurka ee xukunkii caddaanka laga tirada badan yahay ee 90-meeyadii, kaddib 27 sano oo uu xabsi ku qaatay.
Waxaa si heersare ah lagula tacaalayay gurigiisa, iyadoo laga daweynayay caabuq kaga dhacay sambabada kaddi saddex bilood oo uu cisbatalka ku qaatay.
War uu ka sheegay taleefishinka qaranka Koonfur Afrika, ayaa madaxweynaha dalkaasi Mr Zuma waxa uu sheegay in Mandela uu “geeriyooday”.
“Qarankeenna waxa uu waayay halyeey weyn,” Mr Zuma ayaa sidaa yiri.
Image caption Waa xabsigii uu ku xirnaan jiray Mandela
Waxa uu sheegay in Mandela loo sameyn doono aas qaran, iyadoo calamada waddankana hoos loo dhigi doono.
Weriyayaasha BBC ayaa waxa ay sheegayaan in maydka Mandela la geyn doono goob la dhigo meydadka inta aan la aasin oo ku taal magaalada Pretoria, iyadoo aaskiisana ay u badan tahay in uu dhaco maalinta Sabtida soo aadan.
Mandela oo horay ugu guulaystay abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace Prize ayaa waxa uu ahaa mid kamid ah hogaamiyayaasha aadka loo xurmooyo dunida oo dhan kaddib markii uu gacan ka geystay dhiirigalinta dib u heshiisiinta inkastoo uu xabsi ku qaatay 27 sano.
Waxaa yareyd in lagu arko meel fagaare tan iyo markii uu si rasmi ah howlgab u noqday 2004-tii.
“Waxa ka dhigay Nelson Mandela qof weyn waxa ay aheyd bini’aadamnimadiisa. Waxa uu lahaa shakhsiyad uu qofkasta ku han weyn yahay in uu ku sifoobo,” sidaasi waxaa yiri Mr Zuma.
“Walaalahayo reer Koonfur Afrika, Nelson Mandela waa uu isku kaaya keenay, inagoo wadajir ahna waan aasaynaa.”
Ra’iisul Wasaaraha UK, David Cameron ayaa u tacsiyeeyay Mr Mandela, isagoo yiri “Iftiin weyn ayaa dunida ka baxay”.
Xilli hore ayaa weriyaha BBC ee Mike Wooldridge oo ku sugnaa banaanka hore ee guriga Mandela ee magaalada Johannesburg ee Houghton, ayaa sheegay in ay u muuqanaysay in si aan caadi aheyn ay qaraabada Mandela ay ku kulmayaan.
Tiro gawaari ah oo ay dowladda leedahay ayaa sidoo kale halkaa galayay fiidkii, sidaa waxaa sheegay weriyahayaga.
Tan iyo markii laga soo bixiyay cisbitaalka, ayaa madaxweynaha Koonfur Afrika waxa uu si ku celcelis ah u sheegi jiray in xaaladda Mandela ay tahay mid khatar ah balse degan.
Nelson Mandela waxa uu dhashay 1918-dii, isagoo arday qaanuunka barta ahna waxa uu ku biiray xisbiga Golaha Qaranka ee Afrika (African National Congress) 1943-dii.
Asaga iyo hogaamiyayaasha kale ee ANC waxa ay olole kaga soo horjeesteen midab kala soocii (cadaan oo kaliya ayaa xukunka iska leh).
Waxaa lagu xukumay xabsi daa’in 1964-tii, balse waxaa la sii daayay 1990-kii markaasoo Koonfur Afrika ay iska tuurtay midab kala soocii adkaa.
Waxaa la gudoonsiiyay abaalmarinta Nobel Peace Priza 1993-kii, waxaana uuna 1994-tii noqday madaxweynihii ugu horreeyay ee madow ah ee Koonfur Afrika ee la doorto. Waxa uu iscasilay shan sano kaddib markii uu talada qabtay.
Markii uu xafiiska ka tagay kaddib, waxa uu noqday danjirihii ugu darajo sareyay Koonfur Afrika ee olole kaga soo horjeestay cudurka HIV/Aids-ka iyo gacantii uu ka geystay in waddankiisa ay u suurtagasho in uu martigaliyo ciyaarihii koobka adduunka ee sanadii 2010-kii.
Sidoo kale waxa uu ku lug lahaa wadahadaladii nabada ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Koongo, Burundi iyo waddamo kale oo ku yaal qaarada Afrika iyo meelo kale.
1918 Waxa uu ku dhashay gobolka Eastern Cape
1943 Waxa uu ku biiray xisbiga Golaha Qaranka ee Afrika (African National Congress)
1956 Waxaa lagu eedeeay khaa’inul waddannimo, balse waxaa la joojiyay maxkamadeyntiisa kaddib afar sano
1962 Waa la xiray, waxaana lagu helay dambi ah kicin dadweyne iyo in uu ka tagay dalka baasaboor la’aan, waxaana lagu xukumay shan sano oo xabsi ah
1964 Waxaa lagu eedeeyay inuu curyaamiyay howlaha dowladda, waxaana lagu xukumay xabsi daa’in
1990 Waxaa laga sii daayay xabsiga
1993 Waxa uu ku guulaystay billada Nobel Peace Prize
1994 Waxaa uu noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee madaw ah ee la doortay
1999 Waxa uu iska casilay howlihii siyaasadda
2001 Waxaa laga helay kansarka xininyaha ku dhaca
2004 Howlgab ayuu ka noqday howlaha bulshada
2005 Waxa uu ku dhawaaqay geerida wiilkiisa oo u dhintay xanuun dhanka HIV/Aids-ka